Webinar a gosipụtara ọrụ ndị isi okpukpe dị ka ndị mmekọ dị mkpa n'ịkwalite ụkpụrụ mmekọrịta ọha na eze dị mma maka ahụike ọmụmụ na ọdịmma nke ndị na-eto eto na ụmụ nwanyị., yana mkpa ọ dị n'ịmekọrịta na njikọ aka n'ịwulite mkparịta ụka obodo na-agbanwe agbanwe maka mgbanwe dị mma. Ndị ọrụ ngafe haziri ya (Ụlọ ọrụ maka ahụike ịmụ nwa, Mahadum Georgetown) na PACE Project (Ụlọ ọrụ ntụaka ndị mmadụ).
Ebipụtara blọọgụ a na mbụ n'asụsụ French. Ịgụ ụdị French, pịa ebe a.
Nnọọ na Okwu Mmalite
Lelee Ugbu a: 00:00
Peter Munene, Onye isi nchịkwa nke Okwukwe na netwọk omume, nabatara ndị sonyere wee kesaa ebumnuche atọ nke webinar:
Iji ghọta mkpa ọ dị ndị isi okpukperechi na ntinye aka na-eche maka mgbanwe ụkpụrụ ọha na eze na omume ahụike ọmụmụ.
Iji ghọta ụzọ dị iche iche iji soro ndị ndú okpukpe na-akpakọrịta.
Iji gosi ihe mmụta ndị a mụtara n’ihe atụ ndị mere eme nke iso ndị ndú okpukpe na-emekọ ihe.
Ihe Mere Ji Jikọọ Ndị Ndú Okpukpe Ka Ha Gbanwee Ụkpụrụ?
Lelee Ugbu a: 3:53
[Courtney McLarnon-Silk, Onye isi mmemme na Institute for Health Reproductive na Mahadum Georgetown]
Mkparịta ụka a lekwasịrị anya ka ndị isi okpukperechi na obodo nwere ike isi kwado ụkpụrụ mgbanwe maka nsonaazụ ahụike ka mma. Ụkpụrụ ọha na eze na-emetụta ihe anyị na-eme na otú anyị si eme ya. A na-amanye ha site na “otu ntụaka” onye anyị na-agakwuru maka nduzi. N'ọtụtụ ọnọdụ, Ndị isi okpukperechi na obodo nwere ike ịbụ otu ntụaka anyị. Otu ndị dabere na okwukwe nwere ọtụtụ mmemme ahụike, mana enwere ntakịrị ihe akaebe nke uru agbakwunyere site na ntinye aka ha. Edekọwo ntinye aka nke ndị isi okpukperechi n'oge na-adịbeghị anya, ma o siri ike igosi oke mgbanwe dị mma nwere ike ịsị na omume ha. Nyocha a na-enye ohere maka nkwurịta okwu ọzọ maka otu esi etinye ha, nye ha ikike ịkwalite ụkpụrụ dị ka nha anya na nha nhatanha ma rụọ ọrụ na netwọk ha buru ibu iji gbanwee ụkpụrụ mmekọrịta ọha na eze..
Ịbụ nwoke, Ezinụlọ, na Okwukwe: Mmekọrịta ya na ndị isi okpukpere chi iji gbanwee ụkpụrụ mmekọrịta ọha
Lelee Ugbu a: 8:55
[Dr. Samuel Byringiro, Nwa Ahụrụ n'anya, na Olivier Bizimania, Ego anya mmiri]
Ịbụ nwoke, Ezinụlọ, na Okwukwe (MFF) bụ ntinye okwukwe gbadoro ụkwụ n'ịgbanwe ụkpụrụ ọha mmadụ. Ọ na-etinye ndị isi okpukperechi na ndị obodo site na nnọkọ oriri na ọṅụṅụ na ntụgharị uche na mkparịta ụka dị nta na ndị di na nwunye ọhụrụ na ndị nne na nna ọhụrụ iji dozie ụkpụrụ omume nwoke na nwanyị na-ezighị ezi iji belata ime ihe ike n'ụlọ na ịbawanye ojiji nke atụmatụ ezinụlọ.. Nke a bụ mmegharị nke Tearfund's “Na-agbanwe oke nwoke” ntinye aka, bu ụzọ kwọọ ụgbọ elu ma nwalee na Kinshasa, DRC, na mmekorita ya na Mahadum Georgetown's Institute for Reproductive Health na Churchka nke Kraist na Congo, dịka akụkụ nke ọrụ ngafe nke USAID kwadoro.
AMU jikọtara ya na Passages site na MFF iji kwado atụmatụ ezinụlọ nke ọma na ihe karịrị otu narị ụka ọ na-arụ na Rwanda.. Ọ bụ ezie na e nwere nchegbu mbụ banyere ndị ndú okpukpe na-ekwurịta banyere atụmatụ ezinụlọ, Ọ tụrụ AMU n'anya ịhụ ka ndị ndú okpukpe ghọrọ ndị na-akwadosi ike mgbe ihe omume MFF gasịrị. Mgbe ọzụzụ ahụ gasịrị, abụọ n'ime ha bịara ụlọọgwụ inweta ozi na ụzọ ha ga-esi jiri ha mee ihe. Ndị ọgbakọ ha lere nkwa a n'itinye ọzụzụ a n'ọrụ anya nke ọma. Mmekọrịta dị mma nke ndị ndú okpukpe na atụmatụ ezinụlọ mere ka o kwe omume na nke mbụ ya ikwu okwu n'ezoghị ọnụ n'ọgbakọ ma kwuo banyere mkpa atụmatụ ezinụlọ dị na-adabere na mkpa doro anya nke ọgbakọ dị iche iche.. Ọrịa COVID-19 wetara na enyemaka dị ukwuu maka oke ime ihe ike nke ụlọ yana mkpa maka atụmatụ ezinụlọ iji hụ na a na-elekọta ụmụaka na ezinụlọ nke ọma.. N'ihe gbasara nkwado, Ndị isi okpukperechi ahụ weere ọrụ ahụ ma mee atụmatụ ha na ndị isi ụka ka ha gaa n'ihu na-akwado nkuzi na mkparịta ụka obere ìgwè..
“Ndị ndú okpukpe: Ndị na-akwado maka ọdịmma ndị ntorobịa na ụmụ nwanyị”
Lelee Ugbu a: 24:06 na 39:23
[Hadja Mariama Sow, Onye otu CRSD, na Aly Kébé, Onye ndu na-eto eto]
Kọmiti nke mbụ a tụlere aka kpọmkwem na ntinye aka nke ndị isi okpukperechi na nsogbu ahụike ọmụmụ na atụmatụ maka ozi, nzikọrịta ozi, na imekọ ihe ọnụ na obodo iji kwalite ọdịmma ha. Site n’ịgbakwasị arụmụka ha na nduzi a na-achọta n’ihe odide okpukpe, ndị ndú okpukpe, karịsịa ndị CRSD na Senegal na ndị ọgbọ ha na Guinea, Mali, na Mauritania, kpakọrịta site na ngwa mgbasa ozi, dị ka vidiyo “Ọ dịghị ihe a na-agaghị ekwe omume” (Ọ dịghị ihe a na-agaghị ekwe omume) na “Senegal njikọ: Okpukpe na Ahụike Ezinụlọ,” iji ruo ọtụtụ mmadụ ozi. Ngwa ndị a na-emekwa ka o kwe omume irute ọtụtụ ndị na-ege ntị na ọnọdụ okpukpe Alakụba, kpọmkwem maka iji ọgwụ mgbochi afọ ime ọgbara ọhụrụ site n'aka ndị di na nwunye na-amụ n'ofe na nsogbu nke ibibi ụmụ nwanyị na-akpata. (FGM) maka ahụike ụmụ agbọghọ na ndị nne.
[Aliou Diop, Onye isi oche AGD, na Awa Sedou Traore]
Ntinye aka nke ndi obodo na nkparita uka a di oke mkpa. N'okwu a nke ndị isi obodo mejupụtara, karịsịa Aliou Diop, onye nta akụkọ ọkachamara na ahụike ọmụmụ, na Awa Sedou Traore, A tụlere ọrụ ha nke nhazi na inye ozi. Ndị otu AGD na-ahazi ndị ọrụ na-arụ ọrụ na Mauritania, nke gụnyere:
Ndị ndú okpukpe.
Ndị na-eto eto (ndị otu ndị ntorobịa na obodo ha).
Ndị ọrụ gọọmentị.
Ndị ọrụ nka na ụzụ na ego.
Ndị ọrụ ahụ chọpụtara okwu gbasara FGM na iji ọgwụ mgbochi ime ọgbara ọhụrụ na ọmụmụ mbara igwe dị oke mkpa na Mauritania., dị ka ọnụ ọgụgụ mba si kwuo. AGD na-eduzi usoro nke ịmepụta mmepụta multimedia, “Ndị isi okpukperechi na ndị na-eto eto kpebisiri ike n’ịgbahapụ ibi ụmụ nwanyị ibe na ohere nke ịmụ nwa.,” nke ga-enyere aka iziga ma ndị isi okpukperechi ma ndị ntorobịa ozi ndị bụ isi nke òtù ọrụ ahụ chọpụtara. N'ihi ya, nkwado nke ụmụ nwanyị na ndị nwoke na mgbasa ozi bụ ndị ọkachamara na ahụike ọmụmụ na-enyere aka ruo ọtụtụ obodo..
“Terikunda Jékulu: Na-etinye ndị Imam n'ụzọ dị iche iche site na usoro netwọk mmekọrịta iji mebie ihe mgbochi mmekọrịta ọha na eze metụtara atụmatụ ezinụlọ.”
Lelee Ugbu a: 55:54
[Mariam Diakite, Mahadum Georgetown IRH]
Ihe ngosi a lekwasịrị anya na ụzọ ọhụrụ iji tinye imams site na Terikunda Jékulu (TJ) usoro netwọk mmekọrịta iji kwatuo ihe mgbochi mmekọrịta ọha na eze na atụmatụ ezinụlọ. Ngosipụta ahụ gosipụtara ọnọdụ nke usoro ahụ, n'ime ya enwere nnukwu mkpa nke atụmatụ ezinụlọ na-egbochaghị mkpa yana ọnụ ọgụgụ dị ala nke iji ụzọ mgbochi afọ ime ọgbara ọhụrụ na West Africa., karịsịa na Benin na Mali. Achọpụtara na a na-ejikọkarị mkpa ọ dị maka atụmatụ ezinụlọ na ihe gbasara mmekọrịta ọha na eze. Ọmụmaatụ, Mkpebi gbasara ọmụmụ na iji ọgwụ mgbochi eme ihe anaghị adịkarị n'otu n'otu; kama, ụkpụrụ ọha mmadụ na-emetụta ha. Ya mere, na ntinye aka ọ bụla, ọ dị mkpa ilekwasị anya n'ọha mmadụ na ọ bụghị naanị onye ahụ. Ebe ọ bụ na 2016, USAID kwadoro usoro TJ, Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahụike ịmụ nwa mere na Benin, na mmekorita ya na Care and Plan International. Ugbu a, A na-akwalite usoro a na Mali.
Nkwubi okwu na ndụmọdụ ndị ngosi
Lelee Ugbu a: 1:27:23
Ọ dị mkpa iji mesie mmekorita n'etiti ndị ntorobịa na ndị isi okpukperechi, n'etiti okpukpere chi dị iche iche, iji kwado nkwurịta okwu intergenerational, na ịgba ume isonye na ndị isi ọdịnala na mkparịta ụka obodo. Ọ bụrụ na ndị ndú okpukpe na-agwa ma na-eme ka a mara ọkwa ndị e depụtara n'akwụkwọ nsọ banyere iji ndị di na nwunye na-eme ihe mgbochi ime na omume nke FGM., mgbe ahụ ndị isi ọdịnala nwere ike ime otu ihe ahụ na omume omenala dị mma, dịka ndị na-akwalite ọdịmma na ime nke ọma nke nne na nwa site na ohere ọmụmụ, ezigbo nwoke na mmekọrịta di na nwunye, na atumatu omenala ohuru.
Ịkekọrịta ahụmahụ na-aga nke ọma n'etiti mba na ndị na-eme ihe nkiri dị iche iche n'ọhịa bụ otu n'ime ụzọ isi nweta mgbanwe na ụkpụrụ ọha na eze ngwa ngwa.. Agafee ntọala dị ka webinar na ụlọ ọrụ, ọ dị mkpa ka e guzobe, ịkparịta ụka n'ọrụ n'etiti ndị na-eme ihe nkiri si mba dị iche iche, na n'ime obodo, iji mee ka mmụba nke omume mmetụta dị elu na obodo.
Ọ ga-adị ka enweghị ihe akaebe na ntinye aka nke ndị ndú okpukpe na-eme ka ndụ obodo ha ka mma. Enwere ihe akaebe na akụkọ ndụ, ma ọ ka na-esiri ike ịsụgharị nsonaazụ ndị a dị mma na data iji gwa ma duzie ndị na-eme iwu, iji duzie nkwado maka akụrụngwa ndị ọzọ, na iweta mgbanwe n’etiti ndị na-ala azụ. Ihe omuma a gosikwara na site na nsonye ha, ndị na-eto eto na-atụnye ụtụ na mgbanwe dị mma, na otú ha si eme ya. Ka ọrụ ahụ nwee mmetụta na-adịgide adịgide, ọ dị mkpa ime ka mkparịta ụka dị n'etiti ndị isi okpukpe na ndị ntorobịa sikwuo ike, iji kwado ndị na-eto eto na-ebute isi ozi na ndị na-eme iwu. Ọ dịkwa mkpa ịchọpụta na ịkwado omume omenala nke na-agbanwe nke ọma ụkpụrụ ọha mmadụ. N'ikpeazụ, ndị niile na-eme ihe nkiri kwesịrị ime ka mmekorita sie ike ma kwupụta ọganihu nke ihe akaebe kwadoro iji metụta mkpebi ọha na eze, atumatu, na mmemme.
Lelee Ugbu a: 1:08:08
Kedu ka ndị isi okpukpe ga-esi meziwanye ohere ndị na-eto eto na-enweta ọrụ ahụike ịmụ nwa / ezinụlọ (ozi na ohere iji)?
Ọzịza Hadja Mariama Sow
Na Guinea, otu ndị ntorobịa etinyela aka na mmemme niile nke CRSD. Ha enweela ohere iji na ngalaba ahụike rụọ ọrụ, ntorobịa, na ndị isi okpukperechi nke Ndị Kraịst n'ihe gbasara ahụike ọmụmụ/ịhazi ezinaụlọ. Dabere na ngalaba nka dị iche iche, ndị a dị iche iche na-eme ihe nkiri na-enye ndị na-eto eto ozi niile ha chọrọ. Ndị isi okpukpe kwadokwara ìgwè ndị ntorobịa a n'ịkụziri ndị ọgbọ ha ka ha na-eme atụmatụ ezinaụlọ ka ha na-amalite ndụ alụmdi na nwunye ha.. Anyị na-akwado usoro a n'ihi na a na-enwekarị ntụkwasị obi n'etiti ndị na-eto eto ebe ọ bụ na ha na-enwe otu nsogbu. N'ikpeazụ, anyị chọrọ itinye ndị isi ọdịnala na usoro anyị. Ha nwekwara ozi dị mkpa nke nwere ike inye aka kwalite ahụike mmadụ. N'ihi ya, ọ bụ usoro zuru oke nke na-adọta na nsonye nke ndị niile nwere mmasị.
Nzaghachi Aliou Diop
E wezụga ntinye aka nke ndị ndú okpukpe, e nwere akụkụ ọzọ a ga-atụle. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị isi aghọtala mkpa ọ dị iji atụmatụ ezinụlọ maka ahụike na ọdịmma nne na nwa, Ndị ọzọ ka kwesịrị ịkụziri. Ọtụtụ mgbe, a na-ahụta omume anyị dị ka akụkụ nke ebumnuche mpụga. Ọ dị mkpa iwepụ ajọ mbunobi ndị a na ime ka okwu ahụ kwekọọ n'ozizi okpukpe ndị na-akwalite ohere ịmụ nwa n'ezie.. Ihe okpukpe Alakụba machibidoro bụ mgbochi ịmụ nwa. Oghere ọmụmụ, Otú ọ dị, bara uru, na okpukpere chi bụ maka nchekwa ahụike nne na nwa. Ọ dị mkpa ka onye ọ bụla ghọta ozi a iji guzobe mmekọrịta ntụkwasị obi. Ozugbo ndị ndú okpukpe matara echiche ndị a, ha ga-enwe ike ịrụzu oke ọrụ ha na mgba anyị na-alụ.
Nzaghachi Olivier Bizimina
Anyị bu ụzọ kpọtụụrụ ndị isi nwere mmetụta n’obodo ka ha gbasaa ozi ahụ. Iji nweta nkwado ha, anyị na-ekerịta akụkọ banyere ndị mmadụ nwetara nsonaazụ nke omume ọjọọ nke ime ime nso. Yabụ, ha na ndị mmadụ tara ahụhụ na-akpakọrịta wee ghọta ihe ọjọọ nwere ike ịkpata na ejighị atụmatụ ezinụlọ eme ihe. Ọ na-emetụ n'ahụ. Anyị na ndị ọkà mmụta okpukpe rụkọkwara ọrụ iji kọwaa ihe ndị dị n’akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị dị nsọ. Nke a na-enyere aka ibelata nkọwahie na ajọ mbunobi ma gbaa ha ume ịtụle ihe ndị gbara anyị gburugburu. Na ndabere a, ọ bịara dị mfe iso ndị ndú okpukpe na-arụkọ ọrụ.
mmemme dabere okwukwe
ụkpụrụ ọha mmadụ
Onye isi ọrụ mmemme, PRB West na Central Africa
Ya na MBA na Health Economics sitere na CESAG na Dakar na nzere Master na Health Public site na Mahadum Bordeaux IV., ọ na-agba mbọ ịhụ na ịnweta ezigbo ọrụ ahụike mmekọahụ na ịmụ nwa maka mmadụ niile n'ọnọdụ niile. O nwere ọkachamara pụrụ iche na mmepe na nleba anya nke mmemme atụmatụ maka nsogbu ahụike ọmụmụ (ahụike nne na nwa ọhụrụ, atụmatụ ezinụlọ, ahụ ike ịmụ nwa). N'ikpeazụ, ọ na-arụ ọrụ na mmepụta data site na mmemme na-efu na faịlụ ntinye ego iji kwado nkwado na nkwurịta okwu na ndị na-eme iwu ọha na eze na ndị ọzọ na-emepe emepe.. Oumou bụ nwa akwụkwọ PhD ugbu a na Schoollọ Akwụkwọ Ahụike Ọha nke Mahadum Montreal. Nnyocha ya na-elekwasị anya na ihe ịma aka na ohere dị n'ihe gbasara ọchịchị na ego na-adịgide adịgide nke ntinye nke nlekọta onwe onye na nlekọta ahụike isi na Senegal.
Onye ndụmọdụ nka na ụzụ mpaghara, Francophone Africa in Research & MLE, Ụlọ ọrụ Georgetown IRH
Mariam Diakité bụ onye Mali, na-arụ ọrụ dị ka onye ndụmọdụ teknụzụ mpaghara maka Francophone Africa na nyocha na MLE na Institutelọ Akwụkwọ Mahadum Georgetown maka Ahụike ịmụ nwa na Mahadum California., San Diego. Ọrụ ya lekwasịrị anya na ụkpụrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-agbanwe maka ahụike mmekọahụ na ịmụ nwa nke ndị ntorobịa na ndị ntorobịa., yana ndị ọzọ na-adịghị ike.
Onye njikwa mmemme SGBV, Ego anya mmiri
Francesca Quirke bụ onye njikwa mmemme SGBV nke Tearfund, na-ahụ maka ọnụ ọgụgụ elu, mmụta na imeghari ihe omume dabere na okwukwe Tearfund iji gbochie na ịzaghachi ime ihe ike metụtara mmekọahụ na nwoke na nwanyị.: Ịgbanwe nwoke na njem gaa na ọgwụgwọ. Francesca bụ akụkụ nke ngalaba okike na nchekwa zuru ụwa ọnụ ma ọ nọ na UK. Francesca jide MSc na Gender na International Development site na London School of Economics ma na-akwado ọrụ okike Tearfund maka ikpeazụ. 6 afọ, karịsịa dị ka akụkụ nke ọrụ ngafe nke USAID na-akwado maka mkpagharị ụkpụrụ omume na-agbanwe agbanwe.
Ihe mere anọ mere ọdịda ji dị mkpa iji nweta ihe ịga nke ọma